किन झूटो बोल्छन् पुरुषहरू ? | Nepal Newz
Home > नेपाली समाचारहरु > समाचार > किन झूटो बोल्छन् पुरुषहरू ?
घरको शान्ति कायम राख्न पनि पुरुषहरू झूटको सहारा लिन्छन् । जस्तै–श्रीमतीको माइतीका बारेमा, उनका साथीभाइका बारेमा, सासू–ससुराले तिनका बारेमा भनेका सत्य कुरा भन्दा घरमा महाभारत मच्चिन सक्छ । अत: पुरुषहरू यस्ता कुरा लुकाएर वा कुरा बनाएर घरको शान्ति कायम राख्ने प्रयास गर्छन् ।